imanyuwali.plus - Izincwadi +
manuals.plus iqoqo lamanuwali abasebenzisi, imihlahlandlela yemiyalelo, amashidi edatha, kanye nokucaciswa kwemikhiqizo ye-elekthronikhi. Sengeza amamanuwali amasha eqoqweni lethu nsuku zonke, senze isizindalwazi esisesheka kalula sezinsiza zikagesi.
Ngokuvamile, amashidi ayizethenjwa wamadivayisi aqukethe ukucaciswa, imiyalelo yokusetha kabusha, nosizo oluyisisekelo lokusebenzisa. Eminye imiyalelo yandisa lokhu ukuze inikeze amathiphu okulungisa nawokulungisa, eminye ingase ibe isethi encishisiwe 'yamathiphu okuqalisa ngokushesha' - izinto ezibalulekile okudingeka uzazi ukuze uvule nokusebenza ngomshini.
Amamanuwali omsebenzisi anikezwa ngokwesiko ngefomethi ye-PDF, kodwa le fomethi ingaba nzima ukuyisebenzisa kumakhalekhukhwini noma ngoxhumo olunomkhawulokudonsa ophansi. I-Manuals.plus ibhala ngokudidayo amaningi ala madokhumende e-PDF abe avamile web-amakhasi ukuze abasebenzisi bakwazi ukuwafunda kangcono kudivayisi abazikhethele yona. Lokhu kwenza amadokhumenti amaningi afinyeleleke kakhudlwana futhi asesheke uma kuqhathaniswa nefomethi evamile. Ngokungeziwe kokuthunyelwe okulotshiwe, uzothola nesixhumanisi esiya kokwangempela file phansi kokuthunyelwe ngakunye ngaphansi 'kwezithenjwa' - lezi zingadawunilodelwa kamuva futhi zivulwe ngentandokazi yakho web- isiphequluli noma i-PDF viewnjenge-Adobe Acrobat.
Amanye amaqoqo wethu amakhulu wemibhalo/ziyalo ahlanganisa:
Izipikha ze-Anko kanye Namadivayisi Ahlakaniphile
I-Impirii Bluetooth Headphones nezipikha
Uma unebhukwana lomsebenzisi ongathanda ukungezwa kusayithi, sicela ubeke amazwana ngesixhumanisi!
Sebenzisa ukusesha phansi kwekhasi ukuze ubheke idivayisi yakho. Ungathola futhi izinsiza ezengeziwe ku- Injini Yokusesha yomsebenzisiManual.wiki.
I-Westinghouse ETL-ES-Thurlawu-WH21 Thurlow Ibhukwana Lomnikazi Wefeni Ye-Ceiling
I-NUU S5502L LTE Umhlahlandlela Womsebenzisi Wefoni Ehlakaniphile